Guggulsterone ntụ ntụ (95975-55-6) hplc≥98% | AASraw R&D Reagents
/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Guggulsterone ntụ ntụ
Rating: SKU: 95975-55-6. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke ntụ ọka Guggulsterone (95975-55-6), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nlekọta njikwa.
Guggulsterone ntụ ntụ video
Raw Guggulsterone ntụ ntụ isi agwa
aha: Guggulsterone ntụ ntụ
Usoro Molecular: C21H28O2
Raw Guggulsterone ntụ ntụ na ojiji
Devadhupa, Balsamodendrum wightii, Balsamodendrum mukul, Commiphora mukul, Guggul, Guggal, Guggul Gum resin, Guggul Lipids, Guggulipid, Guggulipide, Guggulu, Guggulu Suddha, Guggulsterone ntụ ntụ, wdg.
Guggulsterone ntụ ntụ Usage
Guggulsterone ntụ ntụ bụ phytosteroid dị na resin nke guggul osisi, Commiphora mukul. Guggulsterone ntụ ntụ nwere ike ịdị adị dị ka nke stereoisomers abụọ, E-Guggulsterone ntụ ntụ na Z-Guggulsterone ntụ ntụ. N'ime ụmụ mmadụ, ọ na-eme dị ka onye na-emegide onye nnabata farnesoid X, bụ nke ekwenyere na mbụ na-ebelata njikọta cholesterol na imeju. E bipụtara ọtụtụ ọmụmụ na-egosi enweghị mkpokọta mkpokọta cholesterol zuru oke na-eme site na iji usoro dị iche iche nke Guggulsterone ntụ ntụ, na ọkwa nke lipoprotein dị ala ("cholesterol ọjọọ") mụbara n'ọtụtụ mmadụ. Ka o sina dị, Guggulsterone ntụ ntụ bụ ihe na-eme ka ọtụtụ ihe mgbakwunye na-edozi ahụ.
Oleogum resin (nke a maara dika guggul) site na osisi guggul, Commiphora mukul, nke achọtara na India, Bangladesh, na Pakistan, ka ejirila gwọọ ọrịa dị iche iche gụnyere hyper-cholesterolemia, atherosclerosis, rheumatism, na oke ibu ọtụtụ puku afọ. Achọpụtala Guggulsterone ntụ ntụ dịpụrụ adịpụ site na guggul dị ka ihe ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-akpata ọgwụgwọ nke guggul. Kemgbe ọmụmụ ihe mbụ na-egosipụta mmetụta ọgwụgwọ nke guggul na ụdị anụmanụ na 1966, e meela ọtụtụ ụzọ ụzọ na usoro ọgwụgwọ. Ọ bụ ezie na esemokwu dị iche iche na ọmụmụ ihe, ogo usoro, nyocha ọnụ ọgụgụ, oke nha, na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-ebute ụfọdụ enweghị nkwekọ na mmeghachi omume ọgwụgwọ, data nchịkọta sitere na in vitro, nke doro anya, na ọmụmụ ihe gbasara ụlọ ọgwụ na-akwado nkwado ọgwụgwọ maka guggul nke akọwara na ihe odide Ayurvedic oge ochie. Otú ọ dị, a chọrọ ọmụmụ ihe ọmụmụ n'ọdịnihu nke buru ibu buru ibu na ogologo oge iji kwado nkwupụta ndị a. A na-enweta uru nke obi nke ọgwụgwọ ahụ n'ọtụtụ ọrụ ọgwụ na-arụ na guggul ma ọ bụ Guggulsterone ntụ ntụ, ọkachasị ya hypolipidemic, antioxidant, na ọrụ antiinflammatory. E gosiputala na Guggulsterone ntụ ntụ bụ onye na-emegide ya na farnesoid x receptor (FXR), onye na-ahụ maka ihe ndekọ ederede maka nlekọta nke cholesterol na bile acid homeostasis. Ihe FXR na-emegide Guggulsterone ntụ ntụ ka akwadoro dị ka usoro maka mmetụta hypolipidemic ya. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya na-egosi na ntụpọ Guggulsterone na-achịkwa mgbapụta nnu nke bile (BSEP), onye na-ebufe ihe na-ebu ibu maka iwepụ cholesterol metabolites, acid bile si imeju. Nkọwa dị otú ahụ nke okwu BSEP site na Guggulsterone ntụ ntụ na-amasị cholesterol metabolism n'ime mmiri bile, ma si otú a na-anọchite anya usoro ọzọ enwere ike maka ọrụ hypolipidemic ya. Achọpụtala ntụ ntụ nke Guggulsterone na-egbochi nrụgide nke nuklia nuklia-kappaB (NF-kappaB), onye na-ahụ maka nrụzigharị mkpesa. Achọpụtala ụdị mmeghachi omume nke NF-kappaB site na Guggulsterone ntụ ntụ dị ka usoro nke mmetụta antiinflammatory nke Guggulsterone ntụ ntụ.
Ònye Na-achọ Ya?
Gịnịkwa Bụ Ihe Mgbaàmà Ụfọdụ nke Enweghị Egwuregwu?
Ọ dị m mkpa na ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ijikọta ihe ọkụ ọkụ nke hormones na ọgwụ nke hormones adrenergic (dịka adrenaline) ihe dị ịrịba ama ga-arụpụta. Ọzọkwa, ihe na-adọrọ mmasị bụ eziokwu ahụ nke ECA na-agbakọta na-eme ka ọnụ ọgụgụ nke hormones na-ekesa n'ime ọbara na-agafe oge. Akwukwo nchekwa nke Guggulsterone na-eme nnukwu oru nke imebi Mbelata a, si otú a na-edebe ihe niile na-ere ọkụ na-ere ọkụ na-arụ ọrụ n'ogo kachasị elu.
Zọ ikpeazụ nke ntụ ntụ Guggulsterone nwere ike isi rite uru n'ọgụ a na-agba iji gbaa abụba dị na nri ketogenic na iji uto hormone. Ka oge na-aga, nri ketogenic na-ebelata arụmọrụ nke thyroid site na ibelata ntụgharị nke T4 na ike T3. Ọzọkwa, ebe a na-ewere ntụ ntụ Guggulsterone kwa ụbọchị maka ọnwa 3, ha mepụtara mbelata mmerụ na-aga n'ihu n'ọtụtụ ndị ọrịa. Na tetracycline, Mbelata pasent nke ọnya na-afụ ụfụ bụ 65.2% ma e jiri ya tụnyere 68% na ntụ ntụ Guggulsterone. Dịka ị pụrụ ịhụ, enyi anyị Guggul dị ike ịlụ ọgụ.
Nye pụrụ irite uru na nke a? Hmmm !!! Ọfọn, dịka m nwere ike ịkọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile. Onweghi onye m matara nke na achoghi acha ka nma. Nke a bụ eziokwu karịsịa maka ndị na-arịa ọrịa anabolic / androgenic dị ka ndị a na-eme ka akpụkpọ anụ ahụ nwee ume ma nwee ike ịmị anụ. Ka m maa maa - onweghi onye na-achị Maazị Huggulee Guggulee ọchị! N'ezie, ọ nwere ike ịnwe aha na-atọ ọchị mana n'akwụkwọ m ọ bụ dike. Kedu ebe ọzọ ị nwere ike ịchọta ngwakọta nke ga - enyere gị aka ịkwụsị abụba, melite profaịlụ gị nke cholesterol, ma n'otu oge ahụ mezie ọdịdị gị? Elegidela m anya ogologo ma sie ike ma achọtabeghị otu onye asọmpi.
Ole A Kwesịrị Ime?
Ndi Enwe Emetụta Ọ bụla?
Ehee! Tupu echefuru m, usoro ọgwụgwọ a ga - ewe bụ 30-60mg ugboro atọ kwa ụbọchị na nri.
Na-echeta mgbe niile ịchọta ngwaahịa nke nwere oke ike na-emepụta Guggul! Ndụmọdụ ikpeazụ m bụ ịpụ ma chọta nwoke a, gbanye aka ya, ma nweta ọka ndị ọ na-eweta.
Ịdọ aka ná ntị na Guggulsterone ntụ ntụ
Nkpuru ahihia nke sitere na guggul osisi nwere ihe ndi a na - akpọ powders Guggulsterone ma ikekwe ndi ozo. Nnyocha nchọpụta nke ọnụọgụ abụọ achọpụtala na powders Guggulsterone nwere ike ịgbanwe ọrịa metabolism nke cholesterol site na imeju. Akwukwo nke Guggulsterone nwere ike ime ka mmeputa nke hormones na-emeputa ma na-ejikarị aka na-etinye ihe mgbakwunye maka ihe kpatara ya. A ghaghị iji nlezianya buru ngwaahịa ndị nwere ihe ndọtị na-emepụta guggul n'ihi na ha nwere nsogbu nke mmetụta.
Ruo ọtụtụ puku afọ, a na-eji resin guggul eme ihe na ọgwụgwọ ọdịnala iji na-agwọ ọrịa ogbu na nkwonkwo, ọrịa ogbu na nkwonkwo, ọrịa na-arịa ọrịa akwara, hemorrhoid, nsogbu urinary na ọrịa anụ ahụ. Nkà mmụta sayensị ọgbara ọhụrụ achọtala ihe akaebe na powders Guggulsterone nwere ike ime ihe n'ime imeju, na-edozi nsogbu nke lipid metabolism dị ka cholesterol dị elu. Site na usoro a na-amaghi ama, powders Guggulsterone na-emekwa ka mmepụta nke gland na-eme ka hormones na-arụ ọrụ, na-emewanye ike itinye aka na ahụ.
Mmekọrịta na ọgwụ
E kwesịghị iji ọgwụfarin, ọgwụ aspirin, ọgwụ ndị na-adịghị egbochi ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ ọgwụ ọ bụla ọzọ na-egbochi ọbara ọgbụgba. Nchịkọta Guggul nwere ike ime ka ọbara ọgbụgba ma ọ bụ nke a na-achịkwaghị achịkwa gbasaa mgbe eji ọgwụ ndị a eme ihe. Akwukwo Guggul nwere ike iji ihe omimi gi ma obu ọgwụ ndi ozo na-emeso nsogbu gi. Mkpokọta, ọgwụ na ọgwụ ọgwụ na-agwọ gị nwere ike ibute ihe ize ndụ nke mmiri ọgwụ oyi na-atụ gị, ọnọdụ nke nwere ndụ egwu nke na-emepụta ọtụtụ hormones thyroid. Nchịkọta Guggul nwere ike belata oke irè nke ọgwụ propranolol ma ọ bụ diltiazem.
Mmekọrịta na Ọrịa
Ndị a na-agwọ maka nsogbu ịrịa gị, gụnyere hypo- na hyperthyroidism, kwesịrị ịkpọtụrụ dọkịta ha tupu ha ewepụ ihe na-egbu egbu. Ndị nwere ọrịa imeju ma ọ bụ ọrịa akụrụ nwere ike ghara ịmịpụta ihe na-emekarị ka ọ bụrụ na ha agaghị ewe ya. N'izugbe, gwa dọkịta gị ka ị chọpụta ma ọ ga-adị mma maka gị.
Ihe ndi ozo puru ime
Obere ihe omumu sayensi di na onu ogugu nke ihe ndi ozo. A maghị ma guggul ọ dị mma mgbe ọ dị ime, ma n'ihi mmetụta nke hormones na lipid metabolism ọ kwesịrị izere ya. Nchịkọta Guggul nwere ike ibute isi ọwụwa, ọgbụgbọ, mgbakasị na mgbagwoju anya. A na-akọ akụkọ mmeghachi omume na-egbukepụ egbukepụ.
Guggulsterone uzuzu bu uzo di iche iche nke ndi nabatara ihe ndi choro na steroid, a makwaara inwe ihe ndi a:
Antagonist na-anata mineralocorticoid (Ki = 39 nM)
Onye na-anabata progesterone onye agonist anya (Ki = 201 nM)
Glucocorticoid onye na-anabata ihe nchoputa (Ki = 224 nM)
Onye antagonist na-anabata ihe na-eme ka etrogen (Ki = 240 nM)
Agonist na-anabata estrogen (Ki> 5 μM; EC50> 5 μM)
Onye na-akwado onye na-anabata onye X na-akwado (IC50 = 5-50 μM)
Ogbugba aghara aghara aghara XML (X) (X).
A chọtala Guggulsterone ntụ ntụ n'ime nchọpụta anụmanụ iji na-arụ ọrụ ọnụ; O nwere 42.9% bioavailability zuru oke mgbe ọ na-achịkwa ọnụ na oke, na ọkara ndụ gburugburu 10 awa nke a, na-egosi ezigbo profaịlụ pharmacokinetic.
Guwulsterone ụkọ ntụpọ
Raw Guggulsterone ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Guggulsterone ntụ ntụ si AASraw